नक्कली सुन प्रकरण : विवादमा तानिएका प्रहरी जवानको साथीकाे डेरामा भेटियो एक किलो सुन ! – NepalajaMedia
नक्कली सुन प्रकरण : विवादमा तानिएका प्रहरी जवानको साथीकाे डेरामा भेटियो एक किलो सुन !
August 1, 2020 105
काठमाडौं, १६ साउन । सहस्यमय बन्दै गएको काठमाडौंमा भेटिएकाे सुन काण्डमा मुछिएका उमेश श्रेष्ठकाे डेरामा एक किलो सुन फेला परेको छ । सुन भेटिएको डेरामा साढे १४ केजी चाँदी र आधा किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका श्रेष्ठ बस्दै आएका थिए । दरबारमार्गस्थित बस्ने गरेका श्रेष्ठ सुन तस्करीका सुराक रहेकाे आरोप छ ।
महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनको डेराबाट सुन जस्तै देखिने पँहेलो धातु बारमद गरेका जनाएको छ । दरबारमार्गबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले गरेकाे अप्रेशनमा साे धातु फेला परेकाे हाे। डेराबाट फेला परेकाे सो धातु सुन हाे की नक्कली सुन हाे, भनेर परीक्षण गर्न पठाइएको बताइएको छ । श्रेष्ठलाई अहिले दरबारमार्ग वृतको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिएको छ ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले केही दिनअघि सुन जस्तै देखिने १५ किलो उक्त धातु र २ थान पेस्तोल बरामद थियो । तर साे धातु परीक्षणका क्रममा १४ केजी चाँदी र आधाकिलो सुन भएकाे पुष्टि भएकाे थियाे । शंकास्पद रुपमा हिडिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले दरबारमार्गबाट पछ्याउदै गर्दा झोला फ्यालेर भागेका थिए । यस सम्बन्धमा अझै थप अनुशन्धान भइरहेको छ ।
Prevबिना चेकजाँच भारतीय गाडीलाई काठमाडाैँसम्म आउन दिने निर्णय
Nextकोरोना संक्रमणबाट जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओको मृत्यु
कतै तपाई नक्कली अण्डा त खाइरहनुभएको छैन ? २ मिनेटमै यसरी चिन्नुहोस्